ndị ọzọ mma ngwá ọrụ Suppliers na Factory - China ndị ọzọ mma ngwá ọrụ Nrụpụta
MURAN Vacuum blackhead mwepụ igwe ngwaọrụ egbe pen microdermabrasion whiteheads akpụkpọ tightening imi ngwá
Nke a bụ igwe mmiri na-arụ ọtụtụ ọrụ nke nwere ike ịmịnye isi ojii, otutu, àjà, unyi na ihu yana akpụkpọ ihu dị ọcha nwere ike inye aka mee ka akpụkpọ ahụ gị dị nro, na-eto eto ma jupụta na ike.Ị chọrọ ịma mma karịa?Nweta otu, ọrụ ebube ga-apụta n'ụzọ doro anya ka ejiri ọtụtụ ụbọchị were ya.Isi ojii dị obere ga-apụta ma ọ bụrụ na ị siri ọnwụ na iji.Njirimara & Ọrụ: - Ngwaahịa a bụ nke ihe niile dị n'ime otu ka ọ dabara na ergonomics maka njide dị mfe.- ọkwa atọ iji gboo mkpa nke di ...
Ihe na-ekpo ọkụ na-ahụ maka nlekọta anụ ahụ nkeonwe nke ihe na-ewepụ ihe mkpuchi isi ojii
Ọrụ: 1. Wepụ Blackhead, miri dị ọcha ihu blackhead remover vacuum blackhead remover vacuum blackhead 2. Maka ihe otutu, ọgwụgwọ akpụkpọ anụ pimple 3. Ọgwụgwọ maka akpụkpọ ahụ na-adịghị mma na wrinkle, rejuvenation akpụkpọ 4. Ọgwụgwọ maka ntụpọ na akpụkpọ anụ ahụ dara ada, belata hyperpigmentation akpụkpọ ahụ. Aha ngwaahịa vacuum blackhead remover Model NO MC003 Aha aha: OEM/ODM Ihe: ABS & Plastic Feature Acne Treatment, Black Head Removal, Pore Cleaner, Pore Shrinkin charging USB Charging Water...
Ọkachamara titanium ZGTS Derma Roller 192 agịga maka nlekọta ihu yana ọgwụgwọ enweghị ntutu isi CE Egosiri.
Kedu ihe dermaroller nwere ike imere gị?
1.Mwepu nke wrinkle,mwepu ihe otutu,melite scars, rejuvenation
2. The warara na-elekwasị anya nke saịtị (glabellum, wrinkle,scar)
4. Ọgwụgwọ nke striate gravidarum
5.Mprove wrinkle na ezi ahịrị
6. Ọgwụgwọ ọnya na-agwọ ọnya
7.Mgbochi ntutu isi
8.dermaroller dị nnọọ irè maka ụdị ọgwụgwọ nlekọta anụ ahụ.
Obere unyi eletrọnịkị blackhead remover vacuum rechargeable tool, ihu dị ọcha ngwaọrụ imi
Ị maara ihe kpatara e ji guzobe isi ojii?Ihe kpatara nguzobe isi ojii: adịghị ọcha ezughi oke, mgbochi pore, kọmpat, nchekasị, oke agụụ agụụ, metabolism adịghị mma.Ọkpụkpụ kụchiri emechi, isi ojii na-apụta.Oghere ahụ na-apụta oji ma ọ bụ ihe otutu acicular na agba ọcha, mgbe ụfọdụ protrusion otutu.Ngwaahịa aha Obere electric unyi blackhead remover agụụ rechargeable ngwá ọrụ ihu dị ọcha ngwaọrụ mmịpụta ngwa Model NO MC001 Brand aha: OEM/ODM Ihe: ABS& Plastic Fea...
Kachasị ọkụ!!!ọkwa ahụike derma roller540 agịga dermarollermicroneedletitanium micro agịga
Kedu ihe bụ roller derma?
Dermaroller na-eji mkpanaka igwakorita ọnụ nke nwere ọnụ ọgụgụ agịga, na-ejikọta ya na mmiri na-edozi ahụ na-arụ ọrụ, na-atụgharị mgbe niile n'ebe ọ dị mkpa iji gwọọ ya. Ọ nwere ike ịkụnye ihe karịrị 300,000 micro arịa na epidermis n'ime nkeji ise, na-eme ka usoro nnyefe nri dị mma n'etiti. epidermis na subcutaneous anụ ahụ. Mgbe ahụ, ihe oriri na-edozi ahụ mmiri mmiri nwere ike ịbanye n'ime akpụkpọ ahụ nke ọma. Ya mere mmetụta nlekọta anụ ahụ na-aghọ nke zuru oke.
Usoro ọgwụgwọ obere agịga na-arụ ọrụ nke ọma, dị mma ma bụrụ nke a pụrụ ịdabere na ya maka: belata ihe otutu, belata wrinkles na ahịrị dị mma, na-eme ka ọkpụkpụ gbatịa pụta, Ice pick and chickenpox scars, rejuvenation skin and anti-ging Age spots & Sun mebiri emebi.
Ngwa ọla ọcha nke Rose Gold Comedone Extractor Pimple Pin Tool Blackhead Acne Iwepụ agịga ojii ntụpọ ojii
agịga na-ewepụ ihe otutu bụ ngwa mma, nke ejiri igwe anaghị agba nchara mee.
agịga nke na-ewepụ ihe otutu nwere otu ngwụcha na otu nsọtụ aka.Ọ dịịrị gị mma ikpochapụ ihe otutu ma ọ bụ ntagharị.
Jiri mgbe ịsa ahụ na-ekpo ọkụ ma ọ bụ ịsa ahụ ma ọ bụ mgbe ịsachara ihu mgbe akpụkpọ ahụ dị nro na oghere oghere.
Ọ bụrụ na ọ dị mkpa, jiri agịga wee jiri nlezianya were elu akpụkpọ ahụ ma ọ bụrụ na pores gị etobeghị.
Belata mmebi akpụkpọ ahụ gị